Soo Noqoshada Maalgashiga (ROI) ee Aaladaha Suuqgeynta ee Suuqgeynta | Martech Zone
Soo Noqoshada Maalgashiga (ROI) ee Aaladaha Suuqgeynta ee Suuqgeynta
Talaado, September 28, 2021 Talaado, September 28, 2021 Mark Emond
Sannadka soo socda, Automation -ka Suuqgu wuxuu noqonayaa 30! Haa, si sax ah ayaad u akhriday. In kasta oo ay u muuqato sida tan hadda tikniyoolajiyadda baahsan ay u tahay da 'yar oo ku filan inay weli yeelato finan, xaqiiqdu waxay tahay in madal otomaatiga suuqgeynta (MAP) hadda wuu guursaday, wuxuu leeyahay ilmo yar, waxayna u badan tahay inuu dhowaan qoys bilaabo.
In Demand Spring kii ugu dambeeyay warbixinta cilmi baarista, waxaan sahaminnay xaaladda tiknoolajiyadda otomaatiga suuqgeynta maanta. Waxaan daaha ka qaadnay in ku dhawaad ​​kalabar ururadu ay wali runtii la halgamayaan sidii loo cabbiri lahaa ROI ee Suuqgeynta Suuqgeynta. Ma yaabnay? Runtii maahan. In kasta oo suuqa MAP uu ka sarreeyo USD $ 4B maanta, ururo badan oo B2B ah ayaa wali runtii la halgamaya astaanta suuqgeynta.
Warka fiicani waa in kuwa awooda inay cabbiraan ROI ee Automation Marketing, natiijadu waa xoog badan tahay. 51% ururadu waxay la kulmayaan ROI ka weyn 10%, 22% waxay arkayaan ROI oo ka weyn 22%.
Lambarada La Fahmay
Waxaan aad uga shakisanahay in tirooyinkan ay aad u hooseeyaan. Markaad tixgeliso in iibsadayaasha maanta ee alaabada iyo adeegyada B2B ay inta badan waxbarashadooda iyo hannaanka wax iibsiga ku qabtaan internetka, way adag tahay in la maleeyo in MAP uusan u qiimo badnayn sida soo -saareyaasha iibinta ugu wax -soo -saarka badan.
Habka wanaagsan ee loo tixgeliyo qiimaha waa in la qiyaaso adduun aan MAP ka jirin. Bal qiyaas maareynta ururkaaga maanta adiga oo aan awood u lahayn in aad shaqsi ahaan isgaadhsiiso iyo marxaladda safarka iibsadaha. Ama si aad u aqoonsato hogaamiyaasha ugu kulul uguna gudbiso ku dhawaad ​​waqtiga dhabta ah ururkaaga iibinta. Ka fikir inaadan lahayn mashiinka suuqgeynta oo kobcin kara horseedaya hagaajinta xawaaraha heshiiska.
Furayaasha Hagaajinta ROI ee Suuq -geynta Suuqgeynta
Baaritaankeenu wuxuu daaha ka qaaday qaar ka mid ah tilmaamaha muhiimka ah ee aan aaminsanahay inay hay'adaha ka celinayaan inay si buuxda u gaaraan oo u aqoonsadaan ROI -ga la doonayo ee Suuq -geynta Suuqgeynta. Waxa ugu cad -cadna waa awood la’aanta lagu cabiro. Waxaan sii wadnaa inaan ogaanno in inta badan ururada suuqgeynta ay weli yihiin mudnaanta labaad ee kooxahooda Falanqaynta Ganacsiga, oo leh kheyraad xaddidan oo u huray caawinta suuqgeeyayaasha inay cabbiraan waxqabadka. U hibeynta teknolojiyadda falanqaynta iyo Saynisyahannada Xogta si ay u taageeraan suuqgeeyayaasha waa furaha.
Ka -hortagga labaad ee weyn ayaa ah dad la’aan si ay u maamulaan aagagga si wax ku ool ah. Waxaan weydiinnay jawaabeyaasha sababaha ugu muhiimsan ee aan loogu adeegsanaynin astaamaha qaarkood MAP -da, 55% waxay sababeen shaqaale la'aan, halka 29% ay aqoonsadeen aqoon -darro ku saabsan astaamaha dheeraadka ah. Su'aal kama taagna in qalooca sahayda/dalabka uu si guud u jecel yahay kuwa leh xirfadaha MAP. Waxa kale oo xusuus weyn ah in marka ay ka go'an tahay MAP, maamulayaasha suuqgeynta ay u baahan yihiin inay tixgeliyaan dhammaan saddexda dhinac ee hawlgalka muhiimka ah - dadka, habka, iyo farsamada.
Guulaha Waxtarka leh waa Cad yihiin
Shey kale oo soo booday markii dib loo eegayay natiijooyinkii halbeegga ahaa ayaa ahaa kororka wax -ku -oolnimada suuqgeynta ee MAP abuurtay. Waxaan aaminsanahay in qiimaha ugu weyn ee MAP uu yahay awooda lagu yeesho wada sheekaysiga shaqsiyeed ee SCALE. Waxaa cad xogta in jawaab -bixiyeyaashu ay sidoo kale garwaaqsanayaan faa'iidadan.
Si aad u aragto Warbixinta Cabbirka Iswada ee Suuqgeynta Baahida Guga:
Soo dejiso Warbixinta Cabbirka Awoodda Suuqgeynta ee Guga
Tags: gug dalbashomapKhariidadahasahaminta suuqasuuq-geynta suuqasuuq geynta suuq geyntasahaminta suuq geyntaWarbixinku soo noqo maalgashigaROIsahan
As Dalbashada GugaAasaasaha iyo Madaxweynaha, Mark wuxuu leeyahay xamaasad aad u weyn oo ka caawisa hoggaamiyeyaasha suuq -geynta inay beddelaan dhaqammada Suuqgeynta Dakhliga, taasoo u oggolaanaysa inay noqdaan hoggaamiyeyaal istiraatiiji ah oo ka tirsan ururkooda. Mark wuxuu jecel yahay inuu la taliyo oo baro macaamiisha sida loo horumariyo horumarsan, haddana la taaban karo, xeeladaha Suuqgeynta Dakhliga oo u saamaxaya aaladaha tikniyoolajiyadda suuq-geynta ee isku-dhafan si ay u gaarsiiyaan ka-qaybgalyo dhinacyo badan leh.
Sirdoonka Artificial (AI) Iyo Kacaanka Suuqgeynta Dijital ah
Sidee bay Xayeysiiska Dulucda ahi inooga Caawin Karaa inaan u Diyaargaroobno ​​Mustaqbal aan Cookie lahayn?